Introducing Road Of Rich (ROR)/ Next-Generation RPG Game (Burmese Language) — SteemCoinPan
Introducing Road Of Rich (ROR)/ Next-Generation RPG Game (Burmese Language)
golden.future (66) in myanmar • last year (Edited)
Hi... @roadofrich team
May I introduce Introducing Road Of Rich (ROR)/ Next-Generation RPG Game Based on
Steem Blockchain of @roadofrich to Myanmar Steemit Users, please.
မကြာမီလပိုင်းအတွင်း Steem Blockchain ကို အခြေခံ၍
Game အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုgame ၏ အမည်မှာ Road Of Rich (ROR)
ယခုနှစ် 2019 ခုနှစ်သည် Steemit platform ၌
Game များ ရေပန်းစားသောနှစ် ဖြစ်ပေမည်။
ကျွန်တော်တို့ Myanmar Steemit User များ အနေဖြင့်လည်း Steemit နှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်လာသော
Game များမှ Online ဝင်ငွေ အတန်အသင့်တော့
ကျွန်တော်သည်လည်း အကျိုးအမြတ် ရရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ New Game တွေကို စိတ်ဝင်စားမိနေပါတယ်။
ယခု ပြောပြမည့် ROR game သည်လည်း Free ဝင်ရောက်
ကစားနိုင်သော game ဖြစ်ပါမည်။ သို့သော် အမှန်တကယ်
ဝင်ငွေ ကောင်းကောင်းရရန် သို့မဟုတ် အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်
ကစားနိုင်ရန်သော်ကား အရင်းအနှီး ထည့်ဝင်စရာ
ROR game သည် Web ပေါ်တွင် မလွှင့်တင်သေးခင်မှာ
ကြိုတင်၍ Token ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
၎င်း RORS token ကို Steem-engine ၌
Trade လို့ ရနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Game ၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်မှာ
Resource များ ထုတ်ယူရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်း Resource
များကို ရောင်းစားလို့ ရပါမည်။ Reward အနေဖြင့်
Steem နှင့် RORS token များ ရပါမည်။
DrugwarS game နှင့်လည်း တူညီသော အချက်များ
ပါနိုင်ပါသည်။ အကြံတူရင် နောက်လူ သာစမြဲ ဟု ဆိုရလျှင်
ဤgame က ပိုကောင်းနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
Game ၏ အမည်နာမမှာလည်း အနှစ်သာရ ရှိလှပါသည်။
Mercenary: Game ၏ အဓိက ဇာတ်ကောင် စစ်သား ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို စစ်တိုက်ရန်၊ ကုန်သွယ်ရန် စသော လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် မွေးမြူရပါလိမ့်မည်။
Mining and Collecting: ROR သည် Resources များကို တူးဖော်၊ စုဆောင်းခွင့် ပေးလိမ့်မည်။ တူးဖော် စုဆောင်းခြင်းဖြင့် Resources များ ရနိုင်သလို Mercenary များလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မည်။
Dungeon: စစ်ဖြစ်နေချိန်တွင် အကျဉ်းစခန်းများမှ တန်ဖိုးရှိသော Resources များ ရနိုင်သလို အတွေ့အကြုံများ ရလာပြီး Mercenaries များလည်း ကြီးထွားလာနိုင်သည်။
Trade : Resources, local specialities, items and mercenaries တွေကို ရွာတစ်ရွာစီ၌ ကုန်သွယ်ခွင့် ပြုထားပါမည်။
Guild Warfare: မြို့ပြရဲ့ ထိပ်သီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ကုန်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးနှင့် Community ကို တည်ထောင်နိုင်မည်။ ကစားသမားများသည် ကုန်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးကို ဆက်သွယ် ပူပေါင်း နိုင်ပြီးတော့ အစည်းအရုံးများကြား စစ်ပွဲဖြစ်ပွားကာ Resources များကို လုယူနိုင်ပေမည်။
Investment System: ထိပ်သီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦး ဖြစ်လာရန် ရွာထဲ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ မြို့ပြမှ အခွန်များလည်း လက်ခံရမည်။ ထိပ်သီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦး ဖြစ်လာလျှင် မြို့ပြကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်။
Item System: ROR game ၏ အဓိက အချက်အလက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သော Item များကို Individual houses or Production facilities များ၌ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်။ Item များကို ကုန်သွယ်နိုင်မည်။
Token Economy: RORS token နှင့် ပတ်သက်၍ ပို့စ် တစ်ခု ထပ်တင်ပေးပါမည်။
Thank @roadofrich and my friends so much!
myanmar roadofrich gaming sct palnet partiko
last year by golden.future (66)
စစ်ပွဲတွေရပ် စစ်တေါမတိုက်ကြပါနဲ့ 😃
မြေပြင်မှာရပ်ပြီး ဂိမ်းထဲပဲ တိုက်ကြရင် ကောင်းပါမယ်😁😁
ဒါမျိုးဆို လာထား ဗျာ ကစားပြီးသားပဲ 😂
htwegyi (62) · last year
Game တော့မျက်လုံးမကောင်းတော့ မဆော့ဖြစ်ပါဘူးကိုဟိန်းရာ
lwanwai (59) · last year